7 Digital Chengetedzo Mazano Iwe Haugone Kufuratira muna 2021 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
7 Dhijitari Ekuchengetedza Matipi Iwe Haugone Kurega muna 2021
The Indaneti inounza kurerutsira kwakawanda kuhupenyu hwazvino, pamwe nenjodzi dzinogona kuitika. Iwe unogona kutenga, kubhengi, taura neshamwari uye pamwe kutoshanda online. Kuita izvo zvinhu zvinogadzira dhijitari tsoka yezviitwa zvako uye zvinogona kufumura huzhinji hwehupenyu hwako kune hackers. Hezvino zvinhu zvinomwe zvaunogona kuita kuchengetedza mamwe madhijitari chibatiso paIndaneti.
1. Chengetedza Backups yeData
Rudzikunuro kurwisa kunoitika kana vabiridzi vachikiya kupinda kwedata uye vachida kubhadharwa kuti vadzore mukana wemunhu anenge akuvara. Nekudaro, kunyangwe kubhadhara kazhinji hakuna kukwana kuti uwane ruzivo zvakare. Ndicho chikonzero nei kuri kuchenjera kuchengetedza ekutsiva makopi eruzivo rwakakosha nekutsigira munzira dzakasiyana. Semuenzaniso, unogona kuzvichengeta mugore uye nemadhiraivha epanyama akachengetwa kwaunogara kana kubasa.
Kuita izvo hazvigadzirise nyaya dzinobva kuchinhu chekuti pati yakaipa ine data rako mushure mekurwadziswa kwewareware. Nekudaro, iyo inokutadzisa iwe kubva kunzwa uchiedzwa kubhadhara iyo rudzikunuro nekuda kwekusuwa kuti uwane kuwana kudzoreredzwa.
Kana iwe uchiziva mavhavha asina iyo yega vhezheni yeakakomba data, kuirasa kuburikidza nehlengoware kurwisa hakuna kukuvadza zvakanyanya. Uyezve, ma backups anogona kukubvumidza kuti urambe uchishanda pasina kukanganisa kukuru.
2. Shandisa Zvakanakisa Maitiro Pakusarudza Mapassword
Ongororo ichangobva kuitwa yakawana kuti ndangariro yaive nzira yepamusoro yevanhu kuchengetedza iwo mapassword, anodikanwa ne 59% yevakapindura. Nekudaro, 37% yevanhu vakati vanokanganwa mapassword kamwechete pamwedzi, ne5% vachitotaura kuti zvinoitika zuva nezuva.
Dambudziko guru pakushandisa ndangariro nderekuti unogona kusarudza mapassword anosanganisira zvinhu zvausinga kwanise kukanganwa, zvakaita sezita remhuka, zuva rako rekuzvarwa kana bhendi raunofarira. Zvinhu zvisingakanganwiki zvakare kazhinji zvinhu zvinogona kuwanikwa nevanhu pamusoro pako, pamwe nekukurumidza Google tsvaga.
Funga kushandisa mapassword aunosarudza zvisina kujairika. Ita shuwa kuti iwe unogara uchishandisa akasiyana mapassword pane saiti, futi. Zvikasadaro, zvinodzokororwa zvinoshandiswa zvinopa vanokanganisa mukana wekuwana mukana.
3. Funga Kuvimba neDigital Monitoring Services
Nyika inopa vanhu zvakawanda zvechokwadi zvinhu zvekushushikana nazvo. Chidzidzo che2021 chakaratidza kuti kuzivikanwa kwekuzivikanwa ndiko kutya kwakagovaniswa nehuwandu hwezana revanhu. About 76% yeavo vakaongororwa vakashushikana nazvo, ne34% vachiti ndicho chinhu chakanyanya kunetsa.
Iko hakuna chiyero chimwe chete chinovimbisa kudzivirirwa kune mumwe munhu anoba chitupa chako Nekudaro, iwe unogona kuve unoziva zvakanyanya zviitiko zvinofungidzirwa uchishandisa masevhisi ekuongorora. Mamwe makambani anopa yakatarwa yebavha yekutarisa masevhisi pamubhadharo. Nekudaro, dzimwe sarudzo dzinogona kuuya mahara nezvigadzirwa zvauinazvo kare.
Semuenzaniso, Capital One inopa kiredhiti yekutarisa sevhisi kune avo vane makadhi ayo anotarisawo zviitiko zve data rako rewebhu rakasviba. Bhengi rako rinogona kunge riine maapplication ayo anokuzivisa iwe kune chaiwo-enguva mashandisiro ekadhi rako rekubhengi. Kuwana izvo zviyeuchidzo zvekukurumidza zvinoita kuti zvive nyore kutora matanho pazvinenge zvichidikanwa, kudzikamisa kuomarara kwemhosva yedhijitari kana zvikaitika.
4. Ziva Kuti Yakasimba Sei Dhijitari chengetedzo Inopesvedzera Veruzhinji Maonero
Imwe yeDhijitari chibatiso zvakafanotaurwa gore rino ndizvozvo bhizimisi varidzi vaizoita tora nyaya yacho zvakanyanya, Kuziva kuti kutevera zvakanakisa maitiro kunogona kuvaunzira vatengi vazhinji. Unogona kutarisa izvo zvakanyanya nekuziva izvo Cybersecurity inogona kukanganisa mukurumbira wako. Kurwiswa kwepamhepo zvinogona kuitika kune chero munhu, kunyangwe kana uchitora nzira yakaoma yekugara wakachengeteka.
Nekudaro, kana iwe uchitevera Digital chibatiso maitiro akanakisa nemunhu Indaneti kushandiswa uye chero chinhu chine chekuita nebasa, vanhu vanofadzwa nekuzvipira kwako kugara wakachengeteka online. Unogonawo kugadza muenzaniso wakanaka wokuti vamwe vatevedzere.
Kana iwe uchibatanidzwa muDigital chibatiso nokuti bhizimisi zvikonzero, funga kuti ungaudza sei veruzhinji nezvekuzvipira kwekambani kune data chibatiso uye zvinangwa zvinoenderana. Kutumira blog yekupinda nezve chaiyo zvinhu zvako bhizimisi anoita kudzivirira kutyorwa uye zvimwe zvisingadiwe Digital chibatiso zviitiko zvinogona kupaza zvakanangwa kune vanhu vangave vasina Indaneti chibatiso mamiriro.
5. Nzwisisa uye Chengetedza Kurwisa Kwehunyengeri
Phishing haina kuzova tyisidziro kekutanga muna 2021, asi chiri kunetsekana kuri kukura. Zvinoitika kana vatengesi vepa cyber vachitumira maemail anoita kunge anobva kunzvimbo dzechokwadi asi vachingoda kugutsa vanhu kuti vazivise zvakavanzika.
Pfumo phishing zvakare iri kuwedzera dambudziko. Inotarisa mapoka madiki asi kazhinji inosanganisira zvimwe zvakawanda, achiita zvakagamuchirwa gutsikana zvinoonekwa sezvazviri chaizvo. MaHacker dzimwe nguva anoshandisa magariro einjiniya maitiro kuti aite seakavimbika kune vakakuvadzwa, zvakare.
Chidzidzo che2021 chakaburitsa musanganiswa wezvinhu zvakatarwa mu2020 zvinogona kukwidziridza kutyisidzira kwehunyengeri kune ramangwana rinotaridzika. Semuyenzaniso, makambani masere kubva kugumi akawedzera kushandisa kwavo email, nepo 47% yevanhu vakabvunzurudzwa vakashuma kukwira kwe spoofed gutsikana. Kukurudzira vanhu kuti vafunge vasati vapindura mameseji vachikumbira ruzivo rwemunhu inzira yakangwara yekudzivirira.
6. Chenjera Paunotumira paSocial Media
Kana ukashandisa evanhu vezvenhau, mafidha ako anogona kunge aine ruzivo nezve zvese kubva kumabasa matsva kusvika kumota dzawakatenga kana kutengesa. Joseph Turow, purofesa wekutaurirana paUniversity of Pennsylvania, anoti mafoto anogona kutonyanya kuratidza.
Anotsanangura, "Kana mapikicha akawanda achiratidza mamiriro emunhu uye hukama hwavo nevamwe, ndipo paanowedzerawo munhu iyeye inogona kuratidzwa nenzvimbo yavo izvo zvinoitawo kuti vabiridzi vawane ruzivo rwevanhu zvakanyanya. ” Mifananidzo inogona zvakare kupa ruzivo nekukubatanidza iwe kune vamwe, pamwe ichipa cybercriminals nzira dzekuwana ruzivo nezve iwe kubva kushamwari.
“Dambudziko nderekuti pane mifananidzo yakawanda yevanhu. Iko kune mukana wekuti mumwe munhu abatanidze zita kune rako pikicha. "Kana ukaonekwa mumufananidzo weshamwari dzakamakwa, vanhu vane chinangwa chakaipa vanogona kuedza kutsvaga hukama uhwu vohushandisa kupusisa vanhu kuti vasiye ruzivo," Turow akatsanangura. Unogona kugara wakachengeteka nekugadzirisa zvako zvakavanzika marongero uye kudzikamisa izvo shamwari kana vamwe vanogona kuita nekuona.
7. Ziva njodzi dzinogona kuitika dzekushandisa Veruzhinji Wi-Fi Kubatana
Veruzhinji Wi-Fi inowanikwa zvirinyore asi kwete hazvo kuchengetedzeka. Semuenzaniso, kusaina kusaina sevhisi sevhisi kunogona zvakare kureva kubvumidza kurega vanopa vave nedzimwe dhata dzako. Vamwe vema cybercriminals vanogadzirawo emanyepo vhezheni chaiyo yeWi-Fi hotspots, wozoziva sevanhu vanoishandisa.
Izvi zvinhu hazvireve kuti haufanire kushandisa yeruzhinji Wi-Fi mune chero mamiriro, asi zvine hungwaru kuziva chii kutyisidzira kuripo uye kugara sei zvakachengeteka kana uchifamba navo. Funga kushandisa VPN, iyo inonyora yako data pane veruzhinji network.
Zvakare, funga nezve kudzora zviitiko zvako zveveruzhinji zveWi-Fi kuzvinhu zvisingaise ruzivo rwako rwega panjodzi. Pamwe iwe unogona kupinda padandemutande kuti utarise nguva dze cinema kana mamiriro ekunze, asi kwete kuti utengere chimwe chinhu kana kutarisa account yako yekubhangi.
Proactive Matanho Anosimudzira Dhijitari Kuchengetedza
The Indaneti inounza mikana yakawanda nekupwanya zvipingamupinyi zvenzvimbo uye kurega vanhu vachibata zvakasiyana-siyana zvezviitiko chero pavanenge vari. Nekudaro, matsotsi epamhepo anowanzo kutora mukana wekutsamira kwevanhu panyika yepamhepo. Mazano manomwe akanyorwa pamusoro achakubatsira iwe kudzivirira nyaya gore rino uye mberi.
IoT Kuchengetedzwa muDhijitari Era: Kuchengeta Zvako Gadget Zvakachengeteka
Maitiro Ekudzivirira Wako Smart Imba uye maGajidhi Kubva kuHackers
Jun 9 | Cybersecurity, Dzimba dzakangwara
Wepamusoro 7 Mabhenefiti Ekuhaya Anogoneswa SIEM Mupi
Dai 22 | Cybersecurity, Inotarisirwa SIEM